युवा लेखक तथा टिप्पणीकार उज्ज्वल प्रसाईं नेपाली साहित्य र कलाका क्षेत्रमा अहोरात्र जुटिरहने नाम हो । अंग्रेजी साहित्यका विद्यार्थी प्रसाईंद्वारा अनुदित ‘गणतन्त्रका संघर्ष’ पुस्तक चर्चित छ । ‘रिडर्स झापा’ नामक खुला वैचारिक संस्थाको सक्रिय अध्यक्ष समेत रहेका प्रसाईं औपचारिक साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा बाँधिने भूमिकालाई नवीनता प्रदान गर्दै कला र साहित्य क्षेत्रमा नयाँ विचार आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । आउँदो फागुनमा यो संस्था, झापाको काँकडभिट्टामा ‘कला साहित्य उत्सव’को आयोजनामा जुटिरहेको छ । उनै प्रसाईंसँग ‘रिडर्स झापा’को कला, साहित्य र राजनीतिको आसपास रहेर सुरञ्जन घिमिरेले गरेको कुराकानी ।
रिडर्स झापा’ले ‘रिडर्स’ नाम राखेर युवापुस्तामा ‘कट्टर कम्युनिष्ट’ सिद्धान्तको पक्षमा वकालत गरिरहेको गाइँगुइँ सुनिन्छ नि ?
रिडर्स झापा’ कुनै खास राजनीतिक घटकसँग नजिक छ भन्ने सुनिन्छ । एउटा ‘साहित्य र कला’ क्षेत्रका स्रष्टा र सर्जकहरु भेला हुने कार्यक्रममा राजनीतिलाई उच्च स्थानमा राखेर तर्क गर्नु अलिक असान्दर्भिक भएन र ?
रिडर्स झापा’ले सिर्जनशीलतालाई भन्दा पनि सिद्धान्तलाई ज्यादा ध्यान दिएको पाइन्छ । जब कि राम्रोसँग देश नबुझेका नयाँ पुस्ताका अगाडि विदेशी सिद्धान्तका कुराहरु गरिरहँदा उनीहरुमा मौलिक सैद्धान्तिक ज्ञानको अभाव रहने देखिन्छ नि ?